Azo atao ve ny manangana tranokala maharitra ho an'ny maimaim-poana?
Raha mamaky ity lahatsoratra ity ianao, dia azo inoana fa tianao ny hamoka bebe kokoa amin'ny loharanom-baovao, bilaogy, lahatsoratra, ary ny sisa. Ity lahatsoratra ity dia natao manokana ho an'ireo izay te-hahazo fiarovana mahazatra tsy misy fandaniana. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa ny famerenana ny peta-drindrina avo PR dia afaka manam-paharetana sy asa mafy. Raha azonao atao ny miverina amin'ny rindran-kira mahazatra sy avo lenta, tsy mila ezaka ianao, dia tsy mila an'ity ampahany votoaty ity ianao, moa ve ianao?
Aleo aloha milaza teny fohy momba ny backlinks sy ny dikany ho an'ny taranaka fifamoivoizana. Amin'ny ankapobeny, ny rindran-damina dia mitranga rehefa misy rohy amin'ny tranonkala mifandray amin'ny iray hafa - telemedicine services. Miasa tsotra izao izy io. Voalohany indrindra, mikaroka loharano iray misy ny rohy an-teraka i Google bots. Manombantombana ny lanjany sy ny kalitaon'ny votoaty izay mifototra amin'ity loharano ity. Ankoatra izany, mikaroka ny rindranasa amin'ny tranonkala PageAuthority sy PageRank ary ny habetsahana sy ny kalitaon'ny fifamoivoizana tafiditra. Raha vao vita io fikarohana io, dia fintinina amin'ny fikarohana ny tranonkala mifandraika amin'ny loharanon-tranonkala mifandraika mba hahazoana antoka fa ny rohy dia manan-danja sy azo itokisana. Raha raisina an-tsoratra io angon-drakitra io, Google dia manamarika ny fampitomboana ny tranonkala mifandraika amin'ny manaraka raha mikorontana azy io.
Izany no antony mahatonga ny backlinks maro midika bebe kokoa ny fifamoivoizana sy ny laharana ambony kokoa. Amin'izao fotoana izao dia midika ho mpanjifa vaovao izay hitondra vola amin'ny orinasanao an-tserasera. Noho izany, afaka miteny izahay fa ny finday dia mitondra vola ho anao ary avo hiverina amin'ny fampiasam-bola.
Azo ekena ve ny mividy backlinks maharitra?
Maro ireo webmasters no manapa-kevitra ny hividy rindran-damina mba hanatsarana ny dingan'ny fanatsarana ny marika. Na izany aza, mila mila manam-pahaizana amin'izany ianao mba hividianana marina ireo backlinks izay afaka mitondra ny lanjany ho an'ny tranokalanao. Raha tsy izany, tsy afaka mahazo fiverenana ianao na vao mainka miharatsy aza.
Maro ireo manam-pahaizana momba ny SEO ao amin'ny tranonkala izay mampanantena ny hanangana sori-doha "PR" ambony na "lanjany lehibe". Ny fividianana rohy toy izany, dia mandany fotsiny ny volanao. Satria na dia avy amin'ny loharanom-pejy misy laharana ambony aza ny backlinks dia midika izany fa tsy misy dikany amin'ny tranokalanao. Ankoatra izany, Google dia afaka mamantatra mora foana ny rohy nividianana ary manasazy ny mpividy sy ny mpivarotra.
Tsy isalasalana fa ny sasany amin'ny serivisy dia hahazo ny rohy avy amin'ny tena avo lenta. Afaka manangana backlinks maro ho anao izy ireo, arak'izay azonao handoavana. Na dia izany aza dia misy tranga iray mahaliana, raha vantany vao mijanona amin'ny fandoavana ny tolotr'izy ireo ianao, dia havaozina ireo rohy natsangana ho an'ny tranonkalanao. Izany no antony mahatonga ny volavolan-dalàna voaloa fa tsy ny fomba tsara indrindra hahatonga ny fifamoivoizana amin'ny milina fikarohana.
Inona ireo fomba hafa hahazoana rohy maharitra?
Afaka manamboatra rakitra ho azy ianao, mametraka fifandraisana tsara eo amin'ny raharaham-barotra amin'ny loharanon'ny tranokala. Na raha mandeha ianao dia afaka manakarama mpiasa SEO amin'ny fotoana rehetra mba hanamboarana rindran-dalana. Hisy vidiny bebe kokoa noho ireo rindran-kaonty ahafahanao mijery any amin'ny tranonkala hafa, saingy hitazona ny tranokalanao ao amin'ny pejy SERP voalohany izy ireo mandritra ny fotoana fohy.